10 amamiihe revisions Apple kwesịrị ịtụle maka iPhone 7 - News Ọchịchị
10 amamiihe revisions Apple kwesịrị ịtụle maka iPhone 7
A wireless Nchaji mma nke na-enye igwe na-erughị 20% ike a nta agbam ume mgbe atụba n'aru ulo - zuru okè n'ihi na ndị na-ewe iwe dị mbipụta!
Isiokwu a na-akpọ “10 amamiihe revisions Apple kwesịrị ịtụle maka iPhone 7” e dere site Thomas Batten, n'ihi na theguardian.com on Friday 8th January 2016 16.41 UTC
Izu a, asịrị na Apple, ya neverending ọchịchọ maka a sleeker ekwentị, bụ Ditching ọkọlọtọ 3.5mm headphone jaak na ndị na-abịa iPhone 7 ziteere ụfọdụ ndị ọrụ ahụ ime oké ụzụ. Furu-acha ọcha mkpọtụ nke ekweisi uzu, Otú ọ dị, nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dokwara amamiihe nụrụ kepu kepu revisions na ndozi na iPhone.
Ụba ndụ batrị kwesịrị ime ka o kwe iPhone 7 ndị ọrụ na-eme ka dị ọtụtụ dị ka oku abụọ n'etiti ebubo, na a nọworo na-ele wireless Nchaji mma ga-enye igwe na-erughị 20% ike a nta agbam ume mgbe atụba megide mgbidi.
The iPhone 7 ihuenyo ka o doro anya na e kwalite nke mere na ọ ga-eme ka ụjọ jide ma ọ bụrụ na ọ gụrụ a nta ikuku, ọ bụ ezie na-ede blọgụ na-ekewa n'elu otú ọma ọhụrụ na ihuenyo ga jide imegide gusts.
A kpamkpam adi igwefoto ga-eme ka ọhụrụ wuru na-, Instagram-sitere n'ike mmụọ nsọ nzacha, dị ka otu haziri maka kwupụta ọrụ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwa ọdịnala dị ka Tinder na softens enweghị olileanya na ọrụ 'anya mgbe ha na snap selfies.
Ụfọdụ na isi mmalite ndị kweere na Apple na-eme atụmatụ ịrịọ hip audiophiles site atọhapụ a mmachi mbipụta otu oyiri nke iPhone 7 on vinyl. Hụrụ n'anya American entrepreneur Martin Shkreli nụrụ kepu kepu na inwe mmasị ịzụ ya.
The iPhone 7 plus ga-Njirimara a ọhụrụ zoro ogige wuru n'ime azụ nke ngwaọrụ nnukwu ezu jide atọ ngwugwu nke Taco Bell Fire ihendori, ọ bụ ezie na ngwugwu na-aga ga-ere ere iche iche, tech insiders ekpughe.
Ọtụtụ weebụsaịtị na-ekwu na a ga-ọhụrụ mmeli mma na Siri sistemụ arụmọrụ nke ga-iwekota ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọkaibe olu ude technology nke mere na Siri ga-enwe ike ịmata mgbe ọ na a na-egwu na ịgbanwe ihe ndị ọ na-ejikarị juru afọ ụda ka otu n'ime wheedling ingratiation.
A kpamkpam retooled Apple Maps ga-enyere ndị ọrụ zere ụzọ gasị nke ga-eme ka ha na idi nso ebe ihe karịrị abụọ kpọrọ nkụ Donald trump akwado gbakọtara.
N'ụzọ na-eju, Ekpesala na ọ bụrụ na ị na-etinye abụọ iPhone 7s ke ekebe ọnụ n'otu ntabi anya ma mee ka otu onye ha na-egwu Al Green Kasịnụ Hits, Ị ga-enweta iPhone 7S banyere ọnwa itoolu gachara.
Iji na-agbazi Narị Afọ Iri ọrụ, iMessage e renamed "O bu eziokwu, ị na-ahụ, nanị ya na-akawanye ya na ị na na na otú, otú nri. "
Ma eleghị anya, ihe kasị excitingly, ọ dịla niile ma gosikwara na onye ọ bụla iPhone 7 ga-abịa na a handwritten akwụkwọ ozi si n'aka otu n'ime ndị Chinese ụmụ mgbei, bụ onye wuru ngwaọrụ, Certifying na ha ụtọ na-eme ka ọ na na i kwesịrị echegbula ma ọ bụ ihe ọ bụla ikpe ọmụma.
23110	2 Apụl, Nkeji edemede, Mgbakọ, Atụmatụ, Instagram, iPhone, mobile igwe, Smartphones, Technology, Thomas Batten
← Alzheimer ọgwụgwọ ná mma dị ka ụbụrụ mbufụt gosiri na-isi Oculus Rift: Facebook si mebere eziokwu ekweisi bụ ebe a →